တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: April 2016
ဆရာမခင်သန္တာရဲ့ စာပေဟောပြောပွဲ ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို အတော်များများ ဖေ့စ်ဘွတ်ပေါ်မှာ ရှယ်ထားကြတာ တွေ့ပေမဲ့ မအားတာနဲ့ နားမထောင်ဖြစ်သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရှယ်တဲ့လူက နှစ်မျိုးနှစ်စား ဖြစ်နေတာ တွေ့ရလို့ စိတ်ဝင်စားတာနဲ့ နားထောင်ဖြစ်သွားပြီး ဒီစာကို ရေးပါတယ်။
“ဒီနေ့ခေတ် … ဒီနေ့ခေတ်ဆိုတာ သိပ်မကြာခင်က ပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်ရဲ့ ပညာရေး ကျမတို့မကြိုက်ပါဘူးနော်၊ ကျမလည်း မကြိုက်ပါဘူး။ ပညာရေးဟာ စုတ်ပြတ်တယ် နိမ့်ကျတယ် အဆင့်မရှိဘူး နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်ရင် ဆိုပြီး ဖြစ်ကြတယ်။ ကျောင်းသားတွေ ခေတ်အဆက်ဆက် ဆန္ဒပြကြတယ်။ ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြေခံဥပဒေတွေ ပြန်ရေးဆွဲချင်ကြတယ်၊ လက်ခံပါတယ်၊ ကျမတို့နိုင်ငံ ပညာရေး မကောင်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျမ တခုလောက်မေးချင်တာ အဲဒီ စုတ်ပြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပညာရေး အဆင့်မမီပါဘူးဆိုတဲ့ ပညာရေးကို အဲဒီကျောင်းသားတွေ ဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်ပြီးကြပြီလား … အသုံးမကျပါဘူးဆိုတဲ့ အဲဒီတက္ကသိုလ်ကနေ ပေးထားတဲ့ ပညာ ဘွဲ့တခုကို ယူပြီးကြပြီလား”
ကျမ နားလည်ထားတာကတော့ ကျောင်းသားဆိုတာ အတန်းပညာပြီးဆုံးအောင် သင်ယူနေဆဲသူကို ဆိုလိုတာလို့ ယူဆပါတယ်။ ပညာကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်ပြီးသူ ဘွဲ့ရပြီးသူ တယောက်ဟာ ကျောင်းသား မဟုတ်တော့ပါ။ ဒါကြောင့် စုတ်ပြတ်သတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပညာရေးကို ကျောင်းသားတွေ ဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်ပြီးပြီလား … … … ဘွဲ့တခုကို ယူပြီးကြပြီလား ဆိုတဲ့ မေးခွန်းဟာ လွဲနေတယ်လို့ မြင်တာပါပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ဆက်နားထောင်တော့ …
“ဥပမာလေး တခုပြောပါမယ်။ ကျမတို့ သိပ်ချစ်တဲ့ ကျမတို့ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ၁၉၃၆ ခုနှစ်မှာ တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသားသပိတ်မှောက်ပါတယ်။ သူဦးဆောင်ပြီး သပိတ်မှောက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ … ဘာလို့သပိတ်မှောက်လဲ အဲဒီကျွန်ပညာရေးလို့ သတ်မှတ်တဲ့ အင်္ဂလပ်တွေ သင်ပေးတဲ့ တက္ကသိုလ်ရဲ့ ပညာရေးကို ကျွန်ပညာရေးလို့ သတ်မှတ်သည် ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောင်းသားတွေက ကျွန်ပညာရေး အလိုမရှိ ဒီပညာရေး အလိုမရှိဆိုပြီး သပိတ်မှောက်တာ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဦးဆောင်ဦးရွက်နဲ့ ၁၉၃၆ ခုနှစ်မှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်”
ဆရာမဟာ ပထမကျောင်းသား သပိတ်နဲ့ ဒုတိယ ကျောင်းသားသပိတ်ကို ရောနေဟန်ရှိပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်တို့ သပိတ်မှောက်တဲ့ ၁၉၃၆ ခုနှစ်က ဒုတိယကျောင်းသား သပိတ်ပါ။
၁၉၂၀ ပထမကျောင်းသားသပိတ် ဖြစ်ပေါ်လာပုံကို အရင်ပြောရရင် ဘုရင်ခံ ကရက်ဒေါက် ရေးဆွဲတဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အက်ဥပဒေကို ကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသားတွေက သပိတ်မှောက်ကြတယ်။ ဒီဥပဒေကို ဘာကြောင့် ကန့်ကွက်တာလဲ ဆိုတော့ တက္ကသိုလ်ပညာဟာ လူတိုင်းအတွက် မဟုတ်ဘဲ လက်တဆုပ်စာ ငွေရှင် ဂုဏ်ရှင် အသိုင်းအဝိုင်း အတွက် ရေးဆွဲထားတဲ့ အက်ဥပဒေ ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဆရာမပြောတဲ့ ကျွန်ပညာရေး ဖြစ်နေလို့ ဆိုပါတော့။ အဲဒီမှာ မြန်မာစာသည် ဒို့စာ … စသဖြင့် ကြွေးကြော်ချက်တွေ ပေါ်ထွက်လာတာပါ။ တန်ဆောင်မုန်းလဆုတ် ၁၀ ရက်မှာ ကျရောက်တဲ့ အမျိုးသားနေ့ ရဲ့ အစဟာ အဲဒီ ပထမကျောင်းသားသပိတ်ကြောင့်ပါ။
ဒါ့ပြင် သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားကြီးတွေဟာ ကျောင်းသားငယ်လေးတွေ ပညာသင် မပျက်စေရေးအတွက် အမျိုးသားကျောင်း (နေရှင်နယ်ကျောင်း)တွေ ဖွင့်လှစ် သင်ကြားပေးခဲ့တာကြောင့် ပထမကျောင်းသားသပိတ်ဟာ အမျိုးသားကျောင်းများရဲ့ အစ … လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ဟာလည်း ရေနံချောင်း နေရှင်နယ်ကျောင်းထွက်တယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်တို့ပါဝင်တဲ့ ၁၉၃၆ ခုနှစ် ဒုတိယကျောင်းသား သပိတ်ကို ကြည့်ရအောင် … ။
အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း ပေးစာကဏ္ဍ (Point from the letter) မှာ ပါဝင်တဲ့ ငရဲခွေးကြီး လွတ်နေသည် (The Hell Hound at Large) စာတိုလေးမှာ ရေးသူ ယမမင်း (ညိုမြ) က ငရဲပြည်ကထွက်ပြေးသွားသော ခွေးနက်ကြီး တကောင် တက္ကသိုလ်နယ်မြေတွင် သောင်းကျန်းနေပါသည်၊ တွေ့လျှင် ငရဲပြည်သို့ ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပါ လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ စာကို အင်္ဂလိပ်လို ရေးသားခဲ့တယ်။ အဲဒါကို ဖော်ပြခဲ့လို့ တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေက အယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဆန်းကို ခေါ်ပြီး စာရေးသူကို မေးတဲ့အခါ မဖြေခဲ့တာကြောင့် ကျောင်းထုတ်ပြီး အရေးယူဖို့ စီစဉ်ကြတယ်။ အဲဒီအရင် ရက်ပိုင်းကလည်း တက္ကသိုလ်ဥက္ကဋ္ဌ ကိုနု (ဦးနု) ရဲ့ ဟောပြောချက်တခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုနုကို တက္ကသိုလ် အာဏာပိုင်တွေက ကျောင်းထုတ်ထားကြတယ်။ ဒါတွေကို မကျေနပ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ ၁၉၃၆ ဖေဖော်ဝါရီမှာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ပြီး သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျောင်းသားတွေဟာ ၁၉၃၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ မှာ ရွှေတိဂုံဘုရားတောင်ဘက်မုခ်မှာ အဖွဲ့ဝင် ၃၁ ဦးပါဝင်တဲ့ သပိတ်မှောက် ကောင်စီကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး တက္ကသိုလ်ပညာရေးရဲ့ ချို့ယွင်းချက် ၁၂ ချက်ကို ပြင်ဆင်ဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ တက္ကသိုလ် သပိတ်ဟာ ဟိုက်စကူးကျောင်းသားတွေကိုပါ ကူးစက်သွားတာကြောင့် နောက်ဆုံးမှာ အာဏာပိုင်တွေက ထုတ်ထားတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ပြန်လက်ခံရပြီး အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာလည်း ကျောင်းသား ကိုယ်စားလှယ်တွေကို လက်ခံရပါတော့တယ်။
ဆရာမရဲ့ ဟောပြောချက်ကို ဆက်နားထောင်တော့ ...
“ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကလေ ၁၉၃၇ ကျတော့ သပိတ်လှန်တယ်၊ သပိတ်လှန်တယ်ဆိုတာ သိပါတယ်နော် ဒီခေတ်ကလေးတွေ … ။ မမှောက်တော့ဘူးပေါ့။ ဒီပညာရေးကို မဆန့်ကျင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ သပိတ်လှန်တယ်။ ၃၆ မှာ သပိတ်မှောက်တယ်။ ၃၇ မှာ သပိတ်လှန်တယ်။ ၁၉၃၈ ခုနှစ်မှာ အဲဒီမကြိုက်ပါဘူး ဆိုတဲ့ ကျွန်ပညာရေးစနစ်က ပေးတဲ့ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကို ရအောင်ယူခဲ့တယ်။ အဲဒီ အစိုးရက ပေးတဲ့ပညာတွေနဲ့ပဲ ဘာသာစကားတွေနဲ့ပဲ ကိုယ့်ကို အုပ်ချုပ်တဲ့သူကို သူ့အရိုးနဲ့ သူပြန်ထိုးပြီး တွန်းလှန်ခဲ့တယ်”
တကယ်တမ်း သပိတ်လှန်တာက ကျောင်းသားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်အများစုကို အင်္ဂလိပ်အစိုးရက လိုက်လျောပေးတဲ့အတွက် ၁၉၃၆ မေလ ၁ ရက်မှာ သပိတ်လှန်ခဲ့တာပါ။ ကျောင်းသားတွေ အဓိက တောင်းဆိုတဲ့ ၁၉၂၀ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ သဘောတူတဲ့အပြင် ကျောင်းထုတ်ခံရတဲ့ ကိုနုနဲ့ ကိုအောင်ဆန်းကို ကျောင်းပြန်တက်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။ ကျောင်းအုပ် ဒီဂျေစလော့ကို အငြိမ်းစားပေးပြီး ပါမောက္ခဦးဖေမောင်တင်ကို ခန့်ထားလိုက်တာကြောင့် ဦးဖေမောင်တင်ဟာ တက္ကသိုလ်မှာ ပထမဆုံးမြန်မာလူမျိုးပါမောက္ခ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
နောက်တချက်က ဗိုလ်ချုပ် ၁၉၃၈ ခုနှစ်မှာ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရတယ် ဆိုတဲ့ ကိစ္စကို သေချာအောင် အထောက်အထားရှာတော့ Wikipedia မှာ ခုလို တွေ့ပါတယ်။
In October 1938, Aung San left his law classes and entered national politics. At this point, he was anti-British and staunchly anti-imperialist. He becameaThakin (lord or Master - … ... )
ဝီကီပိဒိယမှာ ပါတဲ့ (lord or Master) ဆိုတာကိုများ မာစတာဘွဲ့ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့လို့ ဆရာမက အမှတ်မှားသွားတာလား။ ဗိုလ်ချုပ်အကို ဦးအောင်သန်း ရေးတဲ့ အောင်သန်းရဲ့ အောင်ဆန်း စာအုပ်ထဲမှာလဲ ခုလိုတွေ့ရပါတယ်။
၁၉၃၆ ခုနှစ် ကျောင်းပြန်ဖွင့်သောအခါ အောင်ဆန်းသည် တကသ၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာပါသည်။
ထိုနှစ်စာမေးပွဲ (ဘီအေ-အထက်တန်းစာမေးပွဲ) ကို မဖြေနိုင်ဘဲ နောက်နှစ် (၁၉၃၇) မှာမှ ဖြေဆိုရပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင် အောင်ဆန်းအဖို့ တနှစ်ပုပ်သွားပါသည်။
အင်္ဂလိပ်စာပေ၊ ဥရောပရာဇဝင်၊ နိုင်ငံရေးဗေဒတို့ကို သင်ယူခဲ့သော အောင်ဆန်းသည် ၁၉၃၇ မတ်လတွင် ဘီအေ စာမေးပွဲကို အောင်မြင်ပါသည်။ ဘီအေအောင်သည်ထိ စာမေးပွဲ တခါမျှ မကျဘူးပေ။ သို့သော်လည်း နောက်နှစ်တွင်ကား ကျောင်းသားကိစ္စ၊ နိုင်ငံရေးကိစ္စတို့ကို အချိန်ပြည့် ဆောင်ရွက်ရသည်ဖြစ်ရာ စာကျက်ချိန် မရသဖြင့် ဘီအယ်လ်ပညာ (ဥပဒေပညာ) ပထမနှစ် စာမေးပွဲတွင် ရှုံ့းပါသည်။ အောင်ဆန်း၏ ပထမအကြိမ် ရှုံးခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးအကြိမ် ရှုံးခြင်းပေတည်း။
ဆရာမက ခုလို ဆက်ပြောပြန်ပါတယ်။
“ဗိုလ်ချုပ်သာ ၃၆ ခုနှစ်က သပိတ်မှောက်ပြီး သပိတ်မလှန်ဘဲ ထားရင် အဲဒီလိုမျိုး လယ်ဗယ်တန်း အင်္ဂလိပ်လို ပြောရတဲ့စကားတွေ ပြောနိုင်ပါ့မလား။ အဲဒီ ပညာရေး သူ့ဟာသူ ကျွန်ပြုပြု ဘာပြုပြု ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း မကောင်းဘူး ဆိုတဲ့ပညာရေးကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်ပြီးတော့မှ ငါတို့ပညာရေးက ဒီလိုရှိရမှာ ငါတို့မြန်မာစာက ဘယ်လိုပါရမှာ ဆိုပြီး ပြောနိုင်ဖို့အတွက် မကောင်းပါဘူးဆိုတဲ့ ပညာရေးကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်ရမယ်”
အဲဒါကလည်း တော်တော်လေး လွဲနေတယ် ထင်တာပါပဲ။ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ သပိတ်လှန်သည်ဖြစ်စေ မှောက်သည်ဖြစ်စေ လူအများထဲမှာ အင်္ဂလိပ်လို public speech ပေးနိုင်ဖို့ ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ကိုယ်တိုင်လေ့လာခဲ့ရပါတယ်။ သပိတ်လှန်ပြီး ကျောင်းဆက်တက်ခဲ့လို့ ဗိုလ်ချုပ်က အင်္ဂလိပ်လိုတွေ လယ်ဗယ်တန်း ပြောနိုင်တာလား။ သပိတ်မလှန်ဘဲ ကျောင်းဆက်မတက်ခဲ့ရင် အင်္ဂလိပ်လိုတွေ မပြောနိုင်တော့ဘူးလား။ ဒီတခါလည်း အောင်သန်းရဲ့ အောင်ဆန်းစာအုပ်ကပဲ ကိုးကားပါရစေ … ။
သပိတ်မမှောက်ခင် တကသအစည်းအဝေးမှာ ဗိုလ်ချုပ်ပြောတဲ့အကြောင်းကို ဗိုလ်ချုပ်အကို ဦးအောင်သန်းက ခုလို ရေးခဲ့ပါတယ်။
ထိုနေ့က အောင်ဆန်း၏ ပြောပုံဆိုပုံသည် အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော စကားရည်လုပွဲ၌ ပြောဆိုခဲ့ပုံနှင့် ဆီနဲ့ရေ ကွာဘိသကဲ့သို့ ကွာခြားနေပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စကားကို ရေရေလည်လည် နိုင်နိုင်နင်းနင်း ပြောဆိုနိုင်ရုံမက အချက်အလက်များသည်လည်း ထိမိရကား ကြားရသူအဖို့ ကြက်သီးမွေးညင်း ထစရာပင်၊
လေးနှစ် ( ၁၉၃၂ မှ ၁၉၃၆) အတွင်း အောင်ဆန်း၏ တိုးတက်မှုသည် ချီးကျူးလောက်ပေသည်။ ထိုသို့တိုးတက်လာရသည်မှာ အခြားကြောင့်မဟုတ်။ အောင်ဆန်းသည် ကျောင်းပိတ်ရက်များတွင် အလကားမနေဘဲ အက်ဒ်မန်းဘာ့ခ် (Edmund Burke)၊ ဒစ်စရေလီ (Disraeli) စသော အင်္ဂလိပ် ပါလီမန် ရာဇဝင်တွင် ထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ၏ မိန့်ခွန်းကို အလွတ်လောက်နီးနီး ရအောင် ဖတ်ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
“အခုကျမတို့ ဒီခေတ်ကျောင်းသားတွေ အခု ကြားမှာပါ အုတ်အော်သောင်းနင်း၊ အဲဒီမကြိုက်ပါဘူးဆိုတဲ့ စုတ်ပြတ်တဲ့ ပညာရေးကို သင်မထားဘဲနဲ့ သူတို့ခေတ် သူတို့အလှည့်ရောက်တဲ့အခါမှာ ဘယ်အရာကို ဖြတ်ထုတ်မလဲ ပြော … ။ တတိယနှစ်မှာ သင်တဲ့ ရှေ့နေဦးသူ၏ စိတ်ဓာတ် မကြိုက်ဖူး ဖြုတ်မယ်လို့ ပြော အခုကျမပြောရင်တောင် သိရဲ့လား အဲဒီကျောင်းသားတွေ၊ သိရဲ့လား ၊ သိမှာမဟုတ်ဘူး၊ မလုပ်ခဲ့တာ မလေ့လာခဲ့တာ၊ အကုန်လေ့လာခဲ့ပြီးမှ ရှေ့နေ ဦးသူရဲ့ စိတ်ဓာတ်က ကောင်းတယ်ဟေ့ ဘယ်မှာ သင်မယ်၊ ဘယ်ဟာကတော့ ဖြုတ်မယ်ဟေ့လို့ ပြောလောက်အောင်က အဲဒီ စုတ်ပြတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပညာရေးကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် သင်၊ ဒါမှ ကိုယ့်ခေတ် ကိုယ့်အလှည့်ရောက်တဲ့အခါမှာ ဘာတွေကို ဖြုတ်မယ်၊ ဘာတွေကိုထည့်မယ် ဘာတွေကို ကောင်းမွန်အောင် လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ အသိရှိဖို့အတွက် ဒီခေတ်လူငယ်တွေကို စင်ပေါ်မှာ ကျမ ဟောပြောတိုင်း ဟောပြောတိုင်း ထည့်ပြောဖြစ်တာ စုတ်ပြတ်တဲ့ ပညာရေးပဲ သင်ထားပါ၊ သင်ထားပါ၊ ကုန်သည်ထိ သင်ထားပါ၊ အဲဒါသင်ထားမှသာ သူတို့ရဲ့ နောက်မျိုးဆက် တဆက်ကို သူတို့ ပြန်ဦးဆောင်တဲ့အခါ ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာ ပညာရေး အခြေခံဥပဒေဆွဲတဲ့အခါမှာ သူတို့ပြောနိုင်မှာပေါ့။ အဲလိုမှ မဟုတ်ရင် ဒီလိုပဲ မကြိုက်ဘူး မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ ပညာရေး နဲ့ လယ်ဗယ်လိုက်သွားမှပေါ့။
ဗိုလ်ချုပ်ကိုပဲကြည့်၊ မတော်လှန်ခဲ့ရင် ၃၈ ခုနှစ်မှာ မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ရပါ့မလား၊ ရိုးရိုးဘွဲ့မဟုတ်ဘူးနော် မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရတာ၊ အဲဒီလို ဘွဲ့တွေရ အဲဒီပညာတွေ သိလို့သာလျှင် ကျမတို့ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းတဲ့အခါမှာ ဘာသာစကားကို နိုင်ငံခြားသား တယောက်လို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောတတ်လို့ ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဟာ အရှေ့ကို ရွေ့ခဲ့တာ အရှေ့ကို မြန်ခဲ့တာ။ အဲဒီလို ဗိုလ်ချုပ်တို့လို မဟုတ်ဘဲ သပိတ်မှောက်ပြီး မှောက် ဘာမှမလုပ်ဘဲ ဒီပညာရေးကို မကြိုက်ဖူးဘဲ တလည်လည် တသက်လုံးပဲ သပိတ်မှောက်လိုက် တော်လှန်လိုက် သပိတ်လှန်လိုက်သာ လုပ်နေရမယ်ဆိုရင် ကျမတို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေ ဒီလိုတောင် ရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူး”
စင်မြင့်ထက်မှာ လက်ညှိုးလေးတထောင်ထောင်နဲ့ ပြောနေတဲ့ ဆရာမ လှလှလေးကို ကြည့်ရင်း ကျမ ရင်ပူလာမိတယ်။ သင်ရိုးညွှန်းတန်းရေးဆွဲတာနဲ့ ပညာရေးဥပဒေရေးဆွဲတာက မတူပါဘူး။ တတိယနှစ်မှာ ပါတဲ့ ရှေ့နေဦးသူ၏ စိတ်ဓာတ်ဆိုတာ သင်ရိုးညွှန်းတန်းပါ။ ဆရာမ ပြောတဲ့ အဲဒီ ရှေ့နေဦးသူ၏ စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း ကျမလည်း မသိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျမသိတာက … သူတို့ တောင်းဆိုချက် (၁၁) ချက်ကိုပါ။ ဘာတွေလဲဆိုတာ ဆရာမလည်း သိထားသင့်ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေဟာ စုတ်ပြတ်သတ်နေတဲ့ ပညာရေးကို မသင်ချင်တဲ့ အကြောင်းတခုတည်းကြောင့် သပိတ်မှောက်ခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။
နိဂုံးချုပ်ရရင်တော့ စာပေဟောပြောပွဲ စင်မြင့်ထက်မှာ ဟောပြောနေတဲ့ ဆရာမအနေနဲ့ သမိုင်းကို ကိုးကားတယ်ဆိုရင် မှန်ကန်တိကျစေချင်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း နောက်လူတွေ အမှတ်မမှား အမြင်မမှားမှာ မဟုတ်လား။
၂၉ ဧပြီ ၂၀၁၆
Posted by မေဓာဝီ at 11:39 AM0comments
ကျွန်းကလေးမှာ တနေ့တာ (၂)
Mamam campsite ကနေ ရှေ့ဆက်သွားတော့ cold drinks sold here ဆိုတဲ့ လက်ရေးဆိုင်းဘုတ်လေး တပ်ထားတဲ့ ဒေသခံအိမ်လေးတလုံး ရှေ့မှာ ပက...်လက် ကုလားထိုင်နဲ့ ထိုင်နေသူဦးလေးကြီးကို တွေ့ရတယ်။ သူက Cold drink လား လို့ ကျမကို လှမ်းမေးတယ်၊ ခုမှ ထွက်လာခါစ ဆိုတော့ အအေးလည်း မသောက်ချင်သေးဘူး၊ ရေဘူးထဲမှာ ရေလည်းကျန်သေးတာနဲ့ နိုး လို့ ခေါင်းခါပြီး ဒီမှာ လမ်းရှိလားလို့ မေးတော့ ရှိတယ် ... တည့်တည့်သွား ... တဲ့။
ကျွန်းပေါ်က ဒေသခံအိမ်လေးတွေဟာ တထပ်ကွန်ကရစ် မြေစိုက် အိမ်လေးတွေဖြစ်ပြီး သွပ်မိုးထားပါတယ်။ တချို့အိမ်တွေရဲ့ ပြတင်းပေါက်တွေကို ခုခေတ်မှာ သိပ်မသုံးတော့တဲ့ မှန်တရုပ်ကပ်တွေ တပ်ထားတာလည်း တွေ့ရတယ်။
ဆက်သွားရတဲ့ လမ်းကလေးက ကတ္တရာလမ်း မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့် တောလမ်း စစ်စစ်လေးပါ။ ဘေးတဖက် တချက်မှာ သစ်ပင်တွေနဲ့ အုပ်ဆိုင်းနေပြီး တချို့နေရာတွေမှာ နေပြောက်တောင် မထိုးပါဘူး။ ရွက်ကြွေတွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ လမ်းကလေးပေါ်မှာ ကျမတို့နှစ်ယောက် စက်ဘီးမစီးဘဲ ခြေကျင်လျှောက်လာခဲ့ကြတယ်။ လှတဲ့နေရာလေး ခဏရပ်လိုက် ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်နဲ့ တနေရာအရောက် စက်ဘီးနဲ့ ဓာတ်ပုံအရိုက်ခံပြီး စမ်းစီးကြည့်ဖို့ ကြိုးစားတော့ စက်ဘီးက လေးတာနဲ့ မထိမ်းနိုင်ဘဲ ယိုင်ထိုးသွားလို့ စက်ဘီးနင်းမယ့် အစီအစဉ်ကို လက်လျှော့လိုက်ရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ နှစ်ယောက်သား ဆက်သွားရင်း အကိုက ...
"ဟာ မြွေကြီး မြွေကြီး" လို့ အလန့်တကြား ပြောတာနဲ့ သတ္တိခဲ ကျမက ထွက်ပြေးဖို့ ခြေလှမ်းပြင်တယ်။ ကျမက အကို့ရဲ့ ဘယ်ဘက်ဘေးက လျှောက်နေတာမို့ တော်သေးတယ်။ မြွေကြီးက သူ့ရဲ့ ညာဘက်မှာ ... ။
"အသေကြီးပါ ... သေနေတာ ခေါင်းတောင်ပြားနေပြီ" တဲ့။
သေနေပြီဆိုလို့ တော်ပါသေးရဲ့လို့ စိတ်ထဲက ဖြစ်မိပေမဲ့ မြွေကို စေ့စေ့ မကြည့်ရဲပါဘူး။ မြွေက သေရင် မျက်စိဖွင့်သေတာမို့ သူ့မျက်စိထဲ မြင်တဲ့လူဆီ သူ့ဆွေမျိုး ကျန်ရစ်သူမြွေတစုက လာပြီး အန္တရာယ် ပေးတတ်တယ်လို့ ငယ်ငယ်က ကြားဖူး ထားတာကိုး။ ကြောက်တာနဲ့ လက်မကို လက်သီးထဲ ထည့်ဆုပ်ပြီး သမ္ဗုဒ္ဓေရွတ်ရင်း စစ်ချီတက်သလို ခြေသံပြင်းပြင်းနဲ့ ဘယ်ညာ ဘယ်ညာ ခပ်ဆောင့်ဆောင့် ခပ်မြန်မြန် ရှေ့ကသွားလိုက်တယ်။
"ဖြေးဖြေးသွားလေ မေရဲ့ ... ကြောက်တယ်ဆိုပြီး ရှေ့ကနေ သွားနေတယ်"
"ကြောက်လို့ ရှေ့က သွားတာလေ အကိုလဲ မြန်မြန်လာ ဘုရားစာလဲ ရွတ်နော်"
သူ့ခမျာ စက်ဘီးလဲတွန်းရ ကျောပိုးအိတ်ကြီးလဲ လွယ်ရတော့ ဘယ်မြန်မြန်လာလို့ ရမှာလဲ။ တောကလည်း ပိုနက်လာသလိုပဲလို့ စိတ်ထဲ ထင်မိတယ်။ ကတ္တရာလမ်းဆီလဲ ရောက်ခဲလိုက်ပါဘိတော့။ ကျမ ကြောက်နေမှာစိုးလို့ လမ်းမလျှောက်တော့ဘဲ စက်ဘီးပြန်စီးကြတယ်။ စက်ဘီးစီးလို့မှ မကြာသေးဘူး ရင်ဘတ်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ နေကာမျက်မှန် မရှိတော့တာ သတိထားလိုက်မိပါရော။
"မေ့ မျက်မှန် အကို့ဆီမှာလား"
"ဒါဆို ဘယ်နား ပြုတ်ကျ ကျန်ခဲ့လဲ မသိဘူး၊ မေ့ဆီမှာ မရှိတော့ဘူး"
"သေချာရှာပါအုံး အိတ်ထဲတွေဘာတွေ ထည့်မိသေးလား"
"မေ့အိတ်မှာတော့ မရှိဘူး၊ အကို့ ကျောပိုးအိတ်ထဲရော"
နောက်ဆုံးတော့ နောက်ပြန်လှည့်ပြီး မျက်မှန်ပျောက်ရှာပုံတော် ဖွင့်ရပါတော့တယ်။
(အကို) "မြွေတွေ့ရင် ခရီးလမ်းဖင့်တယ်ဆိုတာ တကယ်ပဲ"
(ကျမ) "ဒါတောင် အသေမို့နော်"
ပြန်လှည့်ရှာရင်း အလာတုန်းက အအေးဆိုင်ထိ ရောက်သွားတယ်။ မျက်မှန်က မတွေ့ဘူး။ ဘယ်နားကျန်ခဲ့လဲ ပြန်စဉ်းစား ဆိုတာနဲ့ ဖုန်းကင်မရာထဲက ဓာတ်ပုံတွေ ပြန်ကြည့်တော့မှ မြွေမတွေ့ခင်နေရာမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အထိ မျက်မှန်က ရှိသေးတာပဲကိုး။ ဒါဆို စက်ဘီးတက်စီးရင်း ယိုင်သွားတုန်းက ပြုတ်ကျတာပဲနေမှာ ဆိုပြီး တောလမ်းထဲ ပြန်သွားရပြန်ပါတယ်။
(အကို) "မတွေ့ရင်လည်း နေပါစေတော့ကွာ ... အသစ်ဝယ်ပေးပါမယ်"
(ကျမ) "အင်းပါ ... ဒါပေမဲ့ နှမြောစရာကြီး"
အကိုက ညာဘက်ကြည့် မေက ဘယ်ဘက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး စက်ဘီးစီးရင်းနဲ့ ကြည့်လာလိုက်တာ တနေရာ ရောက်တော့ လမ်းကလေးရဲ့ အလယ် သစ်ရွက်ခြောက်တွေပေါ်မှာ မျက်မှန်ကလေးကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ စတွေ့တာက အကိုပါပဲ။ မျက်မှန်ပြန်ရပြီး လမ်းမလျှောက်တော့ပဲ စက်ဘီးနဲ့သာ ဆက်သွားကြတော့တယ်။
(ကျမ) "မြွေနေရာ ကျော်သွားပြီလားဟင်"
(အကို) "အခုပဲ ကျော်သွားတာလေ ဘီးနှစ်ပတ် လှိမ့်စာလောက်ပဲ ရှိအုံးမှာ"
မြွှေကြောက်ပါတယ်ဆိုမှ သူ့ရှေ့က နှစ်ခါ ဖြတ်မိတဲ့ အဖြစ်လေ ... ။ မြွေထပ်တွေ့မှာကြောက်လို့ စက်ဘီးနောက်မှာ ထိုင်လိုက်ရင်း ဘုရားစာ ဆိုနေရတာနဲ့ တောထဲက အသံဗလံတွေကို အာရုံတောင် မခံမိတော့ပါဘူး။
တောလမ်းကလေး အဆုံးမှာ လမ်းခွဲဆိုင်းဘုတ်လေးနဲ့ အတူ ကတ္တရာလမ်းကို ဘွားခနဲ တွေ့လိုက်ရတယ်။ လမ်းပေါ်မှာ လူတအုပ်နဲ့ မျောက်တအုပ် ... ။ မျောက်တွေကို မြင်တော့ ပုပ္ပါးက မျောက်တွေလို ဟိုဟာဒီဟာ လုမှာစိုးလို့ ဦးထုတ်ကို မြဲမြဲဆောင်း၊ မျက်မှန်ကိုအိတ်ထဲထည့် ဖုန်းကို သေချာကိုင်ပြီး သတိ အနေအထားနဲ့ စောင့်ကြည့်တော့ သူတို့က အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ ကိုယ့်ကို သိပ်တောင်ဂရုမစိုက်ဘူး။ မျောက်မောင်းမ ဝဝကြီးက သစ်ပင်ပေါ်မှာ ထိုင်လို့။ မျောက်သားလေးတွေကတော့ အောက်ဆင်းလိုက် အပေါ်တက်လိုက်နဲ့ ဆော့လို့ ... ။ သူတို့ ဆော့နေတာကိုကြည့်ပြီး စောစောက ကြောက်ခဲ့တာ မေ့သွားခဲ့တယ်။
ကတ္တရာလမ်းအတိုင်း သွားရင်းနဲ့ လျှောခနဲ အသံကြားလိုက်လို့ အနောက်လှည့်ကြည့်တော့ တွားသွားသတ္တဝါကြီး နှစ်ကောင် တောစပ်မှာ ကြွေကျနေတဲ့ သစ်ရွက်တွေကြား တရှဲရှဲ တိုးပြီး ဝင်သွားတာ မြင်လိုက်ရလို့ လန့်အော်မိသေးတယ်။ မိချောင်းကြီးတွေ များလားလို့ ထင်တာ ... သေချာကြည့်တော့ ဖွတ်ကြီးနှစ်ကောင်ပါ။ အရှည်က ယောက်ျားကြီး လက်တလံ လောက်ရှိမယ်။ အမြီးတုတ်တုတ်ကြီးတွေနဲ့ အသည်းယားစရာ။ နောက်ထပ်တော့ တောကြက် လေးတကောင်ပဲ ထပ်တွေ့တော့တယ်။ ကြက်တိန်ညင်ကလေး လှမှလှ။ မြေပုံထဲရေးထားတဲ့ ကျွန်းပေါ်က သဘာဝတိရစ္ဆာန် စာရင်းထဲမှာ တောဝက်နဲ့ ဖားလဲ ပါသေးတယ်။ တောဝက်မတွေ့ခဲ့တာ တော်သေးရဲ့။ တောဝက်က မြန်လည်းမြန် အစွယ်နဲ့လည်း ပက်တတ်တာ မဟုတ်လား။
တကယ့်တောနက်ကြီး မဟုတ်တဲ့ ဒီကျွန်းကလေးမှာ လျှောက်သွားရတာကို ကျမအနေနဲ့ စွန့်စားခန်းကြီး တခုလိုပါပဲ။ ကြည်နူးလိုက် ကြောက်လိုက် ပျော်လိုက် ရင်မောလိုက်နဲ့ ခံစားချက် အမျိုးစုံလို့ပဲ။
ရှေ့ကို ခရီးဆက်နှင်ရင်း နေက ပိုပူလာသလို ရေလည်း ဆာလာတယ်။ ရေဗူးထဲမှာလည်း ရေက ကုန်သွားပြီ။ Cold drinks sold here တွေလဲ လမ်းတလျှောက် ထပ်မတွေ့တော့ဘူး။ အဲဒါမှ ဒုက္ခ ... ။
ကျွန်းလေးပေါ်က နားနေဆောင် သစ်သားတဲလေးတွေတိုင်းရဲ့ အနားမှာ အမှိုက်ပုံးလေးတွေ ရှိပေမဲ့ ရေသောက်စရာ ရေတိုင် (drinking water tab)... ကတော့ဖြင့် မရှိပါဘူး။ ဒါဖြင့် ပိုက်ဆံနဲ့ ဝယ်သောက်ရတဲ့ ရေ အအေး စသဖြင့် ဝယ်လို့ရတဲ့ စက်တွေလည်း ရှိသလား ဆိုတော့ မရှိဘူး။ စောစောက နားခဲ့တဲ့ mamam campsite က အိမ်သာရဲ့ လက်ဆေးကြွေခွက် ဘုံဘိုင်က ကျတဲ့ရေကလည်း သံချေးရောင် ဝါညစ်ညစ်နဲ့ ... ။ အိမ်သာအပြင်က ရေတိုင်လေးတွေကလည်း ခြေဆေး လက်ဆေးလို့ပဲ ရတယ်။ ဒါကြောင့် တကယ်လို့ အုပ်စုလိုက် camping သွားကြမယ်ဆိုရင် ချက်ပြုတ်ဖို့နဲ့ သောက်သုံးဖို့ အတွက် ရေအလုံအလောက် သယ်သွားမှ အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။
ကျမတို့ နှစ်ယောက် ရေဆာဆာနဲ့ ဦးတည်သွားနေတာက Noordin Campsite ဆီကိုပါ။ မြေပုံကို ကြည့်လိုက် သွားလိုက်နဲ့ ရောက်ပဲ မရောက်နိုင်သလို။ ရေငတ်ပါတယ်ဆိုမှ ကုန်းတက်တွေနဲ့ တိုးလို့ စက်ဘီးနင်းသူလဲ လျှာထွက်ပြီး မနင်းနိုင်တာနဲ့ ဆင်းပြီး လမ်းလျှောက်ရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ ကိုယ်သွားနေတဲ့ Noordin campsite က ပိတ်ထားတာနဲ့ တိုးပါလေရော ... အမောကို ဆို့သွားတာပဲ။ မတတ်နိုင်ဘူး နောက်ပြန်လှည့်ရတော့တာပေါ့။
အဲဒီနားမှာက NPCC (National Police Cadet Corps) ဝင်းကြီး လည်းရှိပါတယ်။ တံခါးကြီး ပိတ်ထားပြီး ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့် မပြုပါ။ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်မှာ တွေ့ရတဲ့ NPCC Campsite ဆိုတာ အဲဒါကို ပြောတာလို့ နောက်မှ သိရတယ်။ သူ့ကို Camp Resilience လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ secondary2နဲ့3တက်နေတဲ့ NPCC ဗိုလ်လောင်းလေးတွေဟာ ဒီ camp မှာ ၂ ညအိပ် ၃ ရက် ထရိန်နင် လာဆင်းရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီ campsite ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသတဲ့။
ပိတ်ထားတာတွေနဲ့ တိုးနေတာမို့ public jetty ဆီ ပြန်သွားကြပါစို့ ဆိုပြီး ပြန်လှည့်ရင်း တနေရာရောက်တော့ cold drinks sold here ကို တွေ့လိုက်ရလို့ အလွန် ဝမ်းသာသွားပါတယ်။ ကျမတို့အတွက် အိုအေစစ်လေး တွေ့လိုက်ရသလိုပါပဲ။ ဆိုင်ရှင်ဦးလေးကြီးက အင်္ကျီမပါ ဘောင်းဘီတိုနဲ့ အေးအေးလူလူ ပိုက်ဆံတွေ ထိုင်ရေတွက်နေတယ်။ ဆိုင်လေးက မြန်မာပြည် နယ်ဘက်က အိမ်ဆိုင်လေးတွေနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါ။ အမွှေးတိုင်တွေနဲ့ ရေနွေးတအိုး ကပ်ထားတဲ့ ဘုရားစင်လို နတ်စင်ကလေး လည်းရှိတယ်။ စားပွဲခုံ တလုံးရဲ့ အောက်မှာတော့ တဂွက်ဂွက်နဲ့ သူ့ကိုယ်သူ ပါးစပ်နဲ့ ကိုက်ပြီး သန်းတုတ်နေတဲ့ ခွေးတကောင် ... ။ အိမ်ဆိုင်လေးရဲ့ ဘေးဘက်မှာ cactus ပင်တွေ စိုက်ထားတာ တွေ့ရတယ်။
အုန်းရည်ရတယ်လို့ ရေးထားတာ တွေ့လို့ အုန်းရည်မှာလိုက်တယ်။ တလုံးကို ၄ ဒေါ်လာခွဲ ... ၊ အုန်းသီး နှစ်လုံး 100 puls တဗူး မှာလိုက်တယ်။ အုန်းရည်က အရသာရှိတော့ 100 plus က အရသာ မရှိတော့ဘူး။ ရေဆာနေချိန်မှာ သောက်ရတဲ့ အုန်းရည်မို့လား မသိ အလွန်ကောင်းပြီး အမောအပမ်း ပြေသွားတယ်။ အုန်းသီးဇွန်းခြစ်ကလဲ ချိုမွှေးပြီး သိပ်ကောင်းတာပဲ။ ကျမတို့ မရောက်ခင် လူငယ်စက်ဘီးသမား အုပ်စုရယ် နိုင်ငံခြားသားနှစ်ယောက်ရယ် ရှိနေခဲ့တယ်။ ကျမတို့ မပြန်ခင်မှာပဲ van ကားလေးနဲ့ အုပ်စုတစု ထပ်ရောက်လာကြတယ်။ သူတို့ကတော့ ရိုက်ကူးရေး အဖွဲ့က ထင်ပါရဲ့၊ ကင်မရာတွေ အသံဖမ်းမိုက်တွေနဲ့။
ဆက်သွားတော့ ဒီကျွန်းမှာ အမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့ Puaka Hill ကို ရောက်ပါတယ်။ တောင်တက် လမ်းမှာ ရေးထားတဲ့ သတိပေး ဆိုင်းဘုတ် တွေကြောင့် တောင်ပေါ် မတက်ခဲ့တော့ဘူး။ No bicycle beyond this point တဲ့။ ပြီးတော့ trees and branches may fall TAKE CARE တဲ့။ မလွယ်ပါလား ... ။ အချိန်ကလည်း ညနေ ၄ နာရီ သာသာ ဖြစ်လာတော့ ဇက်ဆိပ်ဆီပဲ ပြန်တော့မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ လမ်းမှာ သိပ်လှတဲ့ ရှုခင်းလေးတွေ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်းပေါ့။ အဲဒီနောက် Butterfly Hill ကို ရောက်တယ်။ မောနေကြတာကြောင့် ဆိုင်းဘုတ်နဲ့သာ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး အပေါ်မတက်ခဲ့တော့ဘူး။
Butterfly Hill နားက တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာ temple လေး တခုရှိတယ်။ ဆိုင်းဘုတ်မှာ Shan ဆိုတဲ့ စာလုံးပါလို့ တို့ရှမ်းလူမျိုးများလားလို့ စိတ်ဝင်စား မိသေးရဲ့။ အဲဒီနေရာတွေ ကျော်သွားတော့ Jelutong campsite ဆိုတာ ထပ်တွေ့ပြန်တယ်။ jetty က မရောက်နိုင်သေးဘူး။ အဲဒီဘက်ကို အသွား ခွေးဟောင်သံတွေကြားတော့ ခွေးလိုက်ဆွဲမှာ ကြောက်ပြီး စက်ဘီး ပြန်ကွေ့ကြတယ်။ လမ်းများ မှားသလားလို့ နောက်ပြန်လှည့်လိုက် ကြတာ စောစောက အုန်းရည်သောက်တဲ့ ဆိုင် ကျော်သည်အထိပဲ။ လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ် ပြန်ကြည့်၊ မြေပုံကို ပြန်ဖတ်တော့ အဲဒီနေရာတွေက မှန်နေသားပဲ။ ကိုင်း ပြန်သွားပေအုံးတော့ ... ။ အကိုတော့ မောပြီလေ။
တကယ်တော့ ခွေးဟောင်တဲ့နေရာ ကျော်ရင် ရွာထဲ ပြန်ရောက်တော့မှာ ... ကိုယ်တွေက ခွေးကြောက်ကြောက်နဲ့ ပြန်လှည့်တော့ နှစ်ခါပင်ပန်းတာပေါ့။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီလို ... ။ စက်ဘီးဆိုင်မှာ စက်ဘီးအပ်တော့ ၅ နာရီထိုးနေပါပြီ။ ဇက်ဆိပ်မဆင်းသေးဘဲ ဟိုနားဒီနား ဓာတ်ပုံလျှောက်ရိုက်လိုက်သေးတယ်။ ဇက်ဆိပ်ဆင်းတဲ့ တံတားလေး မုခ်ဦးမှာတော့ Haveanice day ... လို့ နှုတ်ခွန်းဆက် ထားလေရဲ့။
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်းကလေးက ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ပျော်စရာ ရင်ခုန်စရာ ကြည်နူးစရာ ရင်မောစရာ ခံစားချက်ပေါင်းစုံ အတွေးပေါင်းစုံနဲ့ နှစ်ယောက်သား အိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။
စင်္ကာပူ အစိုးရဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်က ဒီကျွန်းကလေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် စီမံကိန်းတွေ ရေးဆွဲခဲ့ကြတယ်။ စင်္ကာပူ မြို့တွင်းက MRT လိုင်းတွေ တိုးချဲ့ဖို့အပါအဝင်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ဒီစီမံကိန်းဟာ အငြင်းပွါးဖွယ် ကိစ္စတရပ် ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီကျွန်းကလေးဟာ ခေတ်မီ တိုက်တာ အဆောက်အအုံတွေ ကင်းမဲ့ပြီး ကားအသွားအလာ မရှိတဲ့နေရာ ... တကယ့်သဘာဝ တောကောင်တွေ သစ်ပင် ပန်းပင်တွေနဲ့ ရွှံ့နွံတွေ ပင်လယ်ရေလှိုင်းတွေကို တနေရာထဲမှာ မြင်တွေ့နိုင်တဲ့ နေရာ ... မြို့ပြကို ငြီးငွေ့နေသူတွေအတွက် အဝေးကြီးသွားစရာမလို ပိုက်ဆံမကုန်ဘဲ အကောင်းဆုံး ရုန်းထွက်နိုင်တဲ့ နေရာ ... ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကို ဆွဲဆောင်စေတဲ့ ဒီ နေရာ ... အဲဒီကျွန်းငယ်ကလေးရဲ့ အနာဂတ်ဟာ စင်္ကာပူ အစိုးရ လက်ထဲမှာ ... တဲ့။
ဒီလို ရှားတောင့်ရှားပါး ကျေးလက် ဒေသတခုကို ခေတ်မီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ချင်သလား ... သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိမ်းသိမ်း ထားမလား ဆိုရင် ကျမကတော့ ... ခေတ်မီစွာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိမ်းသိမ်းထားချင်တာပါပဲ။ (သားရွှေအိုး ထမ်းလာသလိုပေါ့) အစားထိုးမရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုတွေထဲမှာ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်တွေ မပါစေချင်ပါဘူး။ ကျမတို့ ကမ္ဘာကြီး စိမ်းလန်းစိုပြေ လှပဖို့ ဂေဟ စနစ်တွေ မပျက်ယွင်းဖို့ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ အနာဂတ်ဟာ ကျမတို့ အားလုံးရဲ့ လက်ထဲမှာ မဟုတ်လား ... ။
၂၂ ဧပြီ ၂၀၁၆
Posted by မေဓာဝီ at 11:41 AM0comments
ဒေသအခေါ် Pulau Ubin လို့ဆိုတဲ့ Granite Island ကလေးဆီ ဒီကနေ့ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Ubin ဆိုတာ Granite, Pulau ဆိုတာ island တဲ့။ အဲဒီ...ကျွန်းကလေးဟာ စင်္ကာပူရဲ့ အရှေ့မြောက် အရပ်မှာရှိကျွန်းငယ်ကလေး တခုဖြစ်ပါတယ်။
စင်္ကာပူကို ခဏတဖြုတ်ရောက်တုန်း မရောက်ဖူးတဲ့ နေရာ ဘယ်သွားရင် ကောင်းမလဲ လိုက်ရှာတော့ လူတွေဖန်တီးထားတာ မဟုတ်တဲ့ နေရာကို သွားချင်တာကြောင့် ဒီကျွန်းကလေးကို ရွေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ညကတည်းက ကျွန်းကလေးအကြောင်း အင်တာနက်ထဲမှာ အကြမ်းမျဉ်း ဖတ်၊ သွားမယ့်လမ်းကြောင်း (စီးရမယ့် MRT နဲ့ ဘတ်စ်) တွေကို ရှာ၊ မနက်ကျတော့ ရေမိုးချိုး ဘုရားရှိခိုး မနက်စာစားပြီး ထွက်ခဲ့ကြတယ်။
ကျွန်းကလေးကို သွားရမယ့် ကူးတို့ဆိပ်ရောက်ဖို့ တနာရီခွဲ သာသာလောက် ရထားတတန်၊ ဘတ်စ်တတန် သွားရပါတယ်။ ဘတ်စ်ပေါ်ကဆင်း မုန့်နဲ့ အအေးဗူးတွေဝယ်၊ ကူးတို့ဆိပ်ကို လမ်းလျှောက် ... ရောက်ပါပြီ ... Changi Ferry Terminal ... ။ basement ထဲ ဆင်းလိုက်တော့ တဖက်မှာ Pengernag သွားတဲ့ဘက်၊ တဖက်မှာတော့ Ubin ကျွန်းကလေးဆီ သွားတဲ့ဘက် ခွဲထားတာ တွေ့ရတာနဲ့ Ubin ကျွန်းသွားတဲ့ ဘက်က ခုံတန်းရှည်လေးတွေမှာ ထိုင်စောင့်ရင်း ဖုန်းလေးနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်မိတော့ အဲဒီမှာ ဓာတ်ပုံမရိုက်ရဘူး တဲ့။ သတိပေးစာတန်းတွေလည်း ကပ်ထားတာ တွေ့ရလို့ ဖုန်းကလေးကို အသာ သိမ်းလိုက်ရတယ်။
ကျွန်းကလေးကို Bumboat လို့ ခေါ်တဲ့ စက်တပ် ကူးတို့လှေလေးနဲ့ ကူးရပြီး လူ ၁၂ ယောက်ပြည့်မှ ထွက်ပါတယ်။ ကျွန်းကလေးဆီရောက်ဖို့ ၁၀ မိနစ်ခန့် သာ မောင်းရပြီး တယောက်ကို ၃ ဒေါ်လာ ပေးရတယ်။ Bumboat ကို မောင်းသူက အင်မတန်ကျွမ်းကျင်တယ်။ လှေအဆင်း မြင်းအတက် ဆိုပေမဲ့ ဒီလှေပေါ် အဆင်းအတက်က အန္တရာယ် မရှိလှပါဘူး။ ရေထဲ ဖြတ်နေရင်း လှိုင်းလုံးကြီးနဲ့ တိုးလို့ လှေက တကြိမ်လောက် ယိမ်းထိုးသွားပေမဲ့ လှေထဲမှာ အသက်ကယ် အင်္ကျီတွေ အစုံအလင်ပါတာပဲ ဆိုတဲ့ စိတ်ကြောင့် အေးအေး ဆေးဆေးပါပဲ။ ဘေးနားမှာ ထိုင်နေတဲ့ အကို့ကို ရေကူးတတ်လား လို့ မေးကြည့်တော့ ဟင့်အင်း ... တဲ့။ :)
လှေပေါ်မှာ အပြန်အလှန် ဓာတ်ပုံရိုက်ကြ၊ ဆယ်လ်ဖီရိုက်ကြနဲ့ မကြာခင် တဖက်ကမ်း ရောက်ပါတယ်။ သစ်သားဆိပ်ခံတံတားလေးကို ဖြတ်ပြီး Welcome to Pulau Ubin ဆိုတဲ့ မုခ်ဦးလေးကနေ ဝင်လိုက်တဲ့အခါ ကျွန်းကလေးပေါ်ကို ခြေချမိကြပါတယ်။
တံတားပေါ်က ဆင်းဆင်းချင်း လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်နဲ့ ကျွန်းမြေပုံကို တွေ့ရတယ်။ ကဲ ... ဘယ်ဘက်ကို လိုက်မလဲ ... ။ ဒီခရီးကို ကျမက ရွေးတာကြောင့် ကျမကပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ညွှန်ထားတာ များတဲ့ဘက်ကို သွားရအောင် ... လို့။ ဒီလိုနဲ့ ဘယ်ဘက်ကို ချိုးလိုက်တော့ စက်ဘီး အငှားဆိုင်လေး တဆိုင်ကို တွေ့ပါတယ်။ ဆိုင်ရှေ့မှာ လူငယ်လေး တယောက်က စက်ဘီးငှားမလား မေးနေတာနဲ့ ရှေ့ဆက်မလျှောက်ဘဲ တွေ့တွေ့ချင်း ဆိုင်ကပဲ ငှားလိုက်မိတယ်။ နှစ်ယောက်စီးမှာမို့ ကယ်ရီယာပါတဲ့ ဘီးကလေးယူတော့ ငှားခက တနေ့လုံးကို ၁၀ ဒေါ်လာ ... တဲ့။ တယောက်ထဲဆိုရင် ၆ ဒေါ်လာပါ။ ညနေ ၅ နာရီခွဲ ပြန်အပ်ရမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ သူ့ဆီက မြေပုံတချပ် တောင်းပြီး စက်ဘီးတစီးနဲ့ လူနှစ်ယောက် တခါမှ မရောက်ဖူးတဲ့ ကျွန်းကလေးပေါ် လျှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။
စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ နောက်ဆုံးရွာထဲက တရွာလို့ ပြောကြတဲ့ Ubin ကျွန်းကလေးဟာ အကျယ်အဝန်းအားဖြင့် ဧရိယာ ၃.၉ စတုရန်းမိုင်သာရှိတဲ့ ကျွန်းငယ်ကလေးပါ။ ဒီကျွန်းကလေးကို ရောက်သွားတာနဲ့ ၁၉၆၀ အလွန် နှစ်များဆီ ပြန်ရောက်သွား သလို ခံစားရပါလိမ့်မယ်လို့ သူ့ရဲ့ official website က ဆိုထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခုလို ရေးထားသေးတယ်။ "As you arrive, all cares are left behind." တဲ့ တကယ်ပါပဲ ကျွန်းကလေးဘက် ရောက်သွားတာနဲ့ ဖုန်းလိုင်းနဲ့ အင်တာနက် လိုင်းတောင် မမိတော့ဘူး။ Roaming ရပေမဲ့ တကယ့်တောထဲသွားနေတဲ့ စွန့်စားခန်းဖီလင်မျိုး ခံစားချင်တာကြောင့် ဖုန်း အင်တာနက်တွေ မချိတ်တော့ဘူး။
လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်တွေနောက်ကို လိုက်ရင်း public jetty ကနေ ၂.၈ ကီလိုမီတာ ကွာဝေးတဲ့ mamam camp site ကို သွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်။ လမ်းတလျှောက် လှတဲ့နေရာလေးတွေမှာ စက်ဘီးရပ်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်ကြ ဆက်သွားလိုက်ကြပေါ့။ လမ်းမှာ နားနေစရာ သစ်သား တဲငယ်ကလေးတွေနဲ့ လမ်းပြမြေပုံ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ရှိတာကြောင့် သွားရတာ မခက်ခဲလှပါဘူး။ နားနေတဲငယ်လေးတွေတိုင်းမှာ အမှိုက်ပစ်စရာ အမှိုက်ပုံးလေးတွေ ရှိနေတာကို သတိထားမိပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီကျွန်းကလေးဟာ ဟိုးအရင် ဗြိတိသျှကိုလိုနီလက်ထက်မှာ ဂရက်နိုက် ကျောက်ကျင်းလုပ်ငန်း လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်း ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို အဓိကပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၁၈၅၁ ခုနှစ်မှာ ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ Horsburgh မီးပြတိုက်ကို ဒီကျွန်းက ကျောက်တွေနဲ့ ပြလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင် စင်္ကာပူ-ဂျဟိုး တာလမ်းမကြီးကိုလည်း ဒီကျွန်းထွက် ဂရက်နိုက် ကျောက်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့ပါသတဲ့။
၁၉၇၀ ခုနှစ်လွန်ကာလများမှာတော့ ကျောက်ကျင်းလုပ်ငန်းတွေ ပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီး ဒေသခံတွေလည်း တစတစ ပြောင်းရွှေ့သွားကြတဲ့အခါ အရင်က ထောင်ဂဏန်းရှိတဲ့ ဒေသခံတွေကနေ ခုတော့ ရာဂဏန်းမျှသာ ကျန်ပါတော့တယ်။ ကျွန်းပေါ်မှာ ရွှံ့ညွန်ဧရိယာတွေ အများအပြား တွေ့ရပြီး လမုပင် အပါအဝင် အခြား သဘာဝ ပေါက်ပင်တွေလည်း ပေါက်ရောက်ပါတယ်။ လမ်းတလျှောက် မျောက်သံ ငှက်သံ ပိုးမွှားလေးတွေ တစီစီ အော်သံတွေနဲ့ တကယ့် တောနက်ထဲ ရောက်နေသလို ခံစားရတယ်။
နားရင်းသွားရင်း သိပ်မမောခင်မှာ mamam campsite ကို ရောက်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ကျား/မ အိမ်သာနဲ့ နားနေစရာ ထိုင်ခုံလေးတွေ ရှိပြီး ကျောက်တုံးလေးတွေနဲ့ ကမ်းခြေလေးက သာသာယာယာမို့ နေ့လည်စာစားရင်း နားနားနေနေ နေမယ်လို့ စိတ်ကူးလိုက် ကြတယ်။ အိမ်သာခန်းက လူသုံးနည်းတာကြောင့် သန့်ရှင်းရေး သိပ်လုပ်ထားပုံ မရပေမဲ့ အိမ်သာသုံး စက္ကူနဲ့ လက်ဆေးဆပ်ပြာရည် အလုံအလောက် ရှိနေတာကြောင့် အဆင်ပြေပါတယ်။
ရေပြင်ကို ဖြတ်ပြီးတိုက်ခတ်လာတဲ့ လတ်ဆတ်တဲ့လေညင်းရယ်၊ စိမ်းစိုတဲ့ သစ်ပင်တွေရယ်၊ ကျောက်တုံးတွေခြေရင်း လာရောက်ခစားတဲ့ ရေလှိုင်းပုတ်သံ တဝုန်းဝုန်းရယ် ... ဘယ်လောက် သာယာလိုက်ပါသလဲ။ သစ်ပင်မြင့်တပင်ပေါ်မှာ အောက်ချင်းငှက်လို့ထင်ရတဲ့ ငှက်ကြီးတကောင် (သူတို့ရေးထားတာတော့ Pied hornbill တဲ့) နားနေတာတွေ့လို့ အကိုက ဓာတ်ပုံရိုက်ယူခဲ့တယ်။ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ သဘာဝရဲ့ အလှအပတွေ ... ။
သဘာဝနဲ့ ပိုနီးစပ်အောင် ကျမတို့နှစ်ယောက် ခုံမှာတောင် မထိုင်ဘဲ ကျောက်ဖြာလို ပြေပြေပြစ်ပြစ် သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်နေတဲ့ ကျောက်တုံးကြီး ပေါ်မှာပဲ ထိုင်ပြီး နေ့လည်စာ စားကြတယ်။ ပြီးတော့ ပင်လယ်ကမ်းစပ်ကို ဆင်းပြီး ကျောက်တုံးတွေနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြ ပင်လယ်ရေကို တို့ထိ ဆော့ကစားကြနဲ့ နေလိုက်တာ လှိုင်းလုံးတွေ ဝေါခနဲ တက်လာတာ မြင်မှ ကမန်းကတန်း အပေါ်ပြေးတက်ကြရ တယ်။
အဲဒီနောက်တော့ စိုသွားတဲ့ ခြေအိတ်ကိုလဲရင်းနဲ့ အပိုယူလာတဲ့ အင်္ကျီ ဘောင်းဘီပါ တခါတည်း လဲပြီး ရှေ့ ခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။
၂၀၁၆ ဧပြီ ၁၉
Posted by မေဓာဝီ at 1:04 PM0comments
တို ဟိုက် ဖော် မူး
အားလုံးက လွမ်းနေကြရသတဲ့။ … ။
၁၆ ဧပြီ ၂၀၁၆
Posted by မေဓာဝီ at 10:52 AM2comments
သင်္ကြန်အကြတ် ဒုတိယနေ့ ...
၁၅ ဧပြီ ၂၀၁၆
Posted by မေဓာဝီ at 3:29 AM0comments
၁၄ ဧပြီ ၂၀၁၆
Posted by မေဓာဝီ at 3:20 AM0comments
သင်္ကြန်တွင်းမှာ တို့ လိမ္မာကြမယ်။
၁၃ ဧပြီ ၂၀၁၆
Posted by မေဓာဝီ at 3:09 AM0comments
ဒီအချိန် ကိုယ့်ဒေသမှာပေါ့ ... ။
ကဗျာရေးရင်းသာ သင်္ကြန်ကိုကြိုတော့မယ် ... ။
၁၂ ဧပြီ ၂၀၁၆
Posted by မေဓာဝီ at 4:04 AM0comments